Tsy misy ny fiaramanidina 777 mametraka ny marina
fanontaniana Tsy misy ny fiaramanidina 777 mametraka ny marina
1 taona 10 volana lasa izay #802 by jopidioot
Azo atao ve ny manondro ny fomba atao rehefa manamboatra ny 777 ianao P3Dv4. Tsy misy amin'izy ireo miasa. Tsy misy porofo azo. Mampiseho (ao) tsy misy fitaovana fitaterana.
Misaotra anareo nandray: 23
1 taona 10 volana lasa izay #803 by rikoooo
As for now the Boeing 777s are not compatible with Prepar3D v4, satria P3D v4 is a 64 bits application and every add-on made for FS2004 is only 32 bits compatible.
Raha tsy manavao ireo modely ireo mpanoratra dia tsy misy zavatra azontsika atao afa-tsy ny miandry.
Manana ny tsara sidina
Erik - Jeneraly Administrator - foana faly hanampy
Fotoana mamorona pejy: 0.160 segondra